News 18 Nepal || वागमती प्रदेशका नेपाल पक्षले तोक्यो जिल्ला नेतृत्व, कहाँ कसलाई जिम्मेवारी ?
वागमती प्रदेशका नेपाल पक्षले तोक्यो जिल्ला नेतृत्व, कहाँ कसलाई जिम्मेवारी ?
काठमाडाैं । माधव नेपाल पक्षीय एमालेले वागमती प्रदेशका जिल्लाहरुमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ । वागमती प्रदेश कमिटी बैठकले जिल्ला इन्चार्जसहित नेतृत्व चयन गरेको हाे । काठमाडौं इन्चार्जको जिम्मेवारी सावित्रा भुसाललाई दिइएको छ । काठमाडौं महानगरको इन्चार्जमा जीवनराम श्रेष्ठ र सह-इन्चार्जमा सुरेन्द्र पाण्डेय चयन भएका छन् ।
देवशंकर पौडललाई रामेछाप, अरुण नेपाललाई सिन्धुपाल्चोक, कृष्ण खनाललाई चितवन, विरोध खतिवडालाई मकवानपुर, सोमप्रसाद मिश्रलाई भक्तपुर, कमजजंग राईलाई सिन्धुली र माधव अर्याललाई रसुवाको इन्चार्ज तोकिएको छ । सिन्धुपाल्चोकको अध्यक्षमा झंक नेपाल, उपाध्यक्षमा इन्द्रमाया गुरुङ, सचिवमा कमल नेपाल र उपसचिवमा सूर्य लामा चयन भएका छन् ।
ललितपुरको अध्यक्ष हरिकृष्ण थापा बनेका छन् । उपाध्यक्षमा कृष्णमान लामा, सचिवमा प्रेम महर्जन, उपसचिवमा तारा संजेल, ललितपुर महानगर अध्यक्षमा श्रीगोपाल महर्जन चयन भएका छन् । नुवाकोटको अध्यक्षमा नारायण खतिवडा, उपाध्यक्ष वासु बढुवाल, सचिव वुद्धि प्रधान, उपसचिव विष्णु लोहनी बनेका छन् ।
काठमाडौं अध्यक्ष बसन्त मानन्धर, उपाध्यक्ष शोभा सापकोटा, सचिव कुसुम कार्की, उपसचिव एलपी श्रेष्ठले जिम्मेवारी पाएका छन् । काभ्रेको अध्यक्ष टोकबहादुर वाइबा चयन भएका छन् भने उपाध्यक्षको जिम्मेवारी तोकिएको छैन । सचिव दिपक गौतम बनेका छन् भने भक्तकुमार लामाले उपसचिवको जिम्मेवारी पाएका छन् ।
मकवानपुरमा मुनु सिग्देल अध्यक्ष, बद्री लम्साल उपाध्यक्ष, विष्णु ढकाल सचिव, मिना लामा उपसचिव चयन भएका छन् । चितवनको अध्यक्षमा तेजेन्द्र खड्का चयन भएका छन् । अन्य पद खाली राखिएको छ । धादिङमा शिवराज कंडेल अध्यक्ष, इन्दिरा ढुंगाना उपाध्यक्ष, सुभाव खतिवडा सचिव, शम्भु थापा उपसचिव चयन भएका छन् । सिन्धुलीको अध्यक्ष सूर्य पाख्रीन भएका छन् ।
उपाध्यक्ष, सचिवमा क्रमशः चित्रबहादुर लुमेली र तारानिधी पोखरेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ । रसुवामा अध्यक्ष सचिव मात्रै तोकिएको छ । अध्यक्षमा पेम्बा तामाङ छन् भने सचिव शिव लामिछाने चयन भएका छन् । रामेछापामा शान्ति पौडेल अध्यक्ष र ज्ञानकुमार श्रेष्ठ सचिव बनेका छन् । अन्य पद खाली राखिएको छ । भक्तपुरमा रजन केसी अध्यक्ष र अनिल श्रेष्ठ सचिव चयन भएका छन् । दोलखामा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष सचिवमा क्रमशः भीम दहाल, भुवन केसी, प्रोणप्रताप केसी चयन भएका छन् ।